Aung Thiri 3D Cinema Lashio - Download Facebook Videos - GenFK.com
ရှမ်းပြည်နယ်၏ ပထမဦးဆုံးသော မင်္ဂလာအဆင့်မြင့်ရုပ်ရှင်ရုံအုပ်စုဝင် Digital 3D ရုပ်ရှင်ရုံ
The first 3D Digital Cinema in Shan State, Myanmar to provide local people with world class entertainment
Features :Dolby® 3D Digital Cinema System, Dolby® Digital 7.1 Surround Sound System
အောင်သီရိ 3Dအဆင့်မြင့်ရုပ်ရှင်ရုံသည် ရှမ်းပြည်နယ်၏ ပထမဦးဆုံးသော မင်္ဂလာအဆင့်မြင့်ရုပ်ရှင်ရုံအုပ်စုဝင် Digital 3D ရုပ်ရှင်ရုံဖြစ်ပြီး နာမည်ကျော်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားသစ်ကြီးများအားနောက်ဆုံးပေါ် Dolby 3D ရုပ်ရှင်ပြစက်ကြီးများဖြင့် 4K Ultra HD Resolution ရုပ်ထွက်စနစ်၊ Dolby Digital 7.1 Surround Sound System ပတ်လည်အသံစနစ် အစရှိသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မီရုပ်ရှင်ပြစနစ်များဖြင့် နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီကြီးများမှတရားဝင်ဝယ်ယူသော DCP (Digital Cinema Package) များအား နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီအရုပ်အသံကြည်လင်ပြတ်သားစွာဖြင့်ပြသလျက် ရှိပါသည်။5HPစွမ်းအားရှိသော Air Conစက်ကြီးများဖြင့် လေအေးပေးစနစ်၊ ရေမြုပ်ကူရှင်ထိုင်ခုံများထားရှိခြင်းဖြင့် မိသားစုနှင့်တကွသက်တောင့်သက်သာစွာ အပန်းဖြေနိုင်ရန်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။
FB URL: https://www.facebook.com/aungthirilashio/
Maze Runner The Death Cure - Trailer
Tiger Zinda Hai ============= Screening Date : 5.1.18 2012ကထွက်ခဲ့တဲ့ Ek Tha Tiger ရုပ်ရှင်ရဲ့ အဆက်အဖြစ် ထွက်လာတဲ့ Tiger Zinda Haiမှာ မင်းသားကြီးSalman Khanနဲ့ Katrina Kaifတို့ကို အတူပြန်တွေ့ရမှာပါ.. ဒီရုပ်ရှင် ဟာ 2014တုန်းက ISIL အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့ ပြန်ပေးဆွဲခြင်းခံရတဲ့ အိန္ဒိယ Nurseမလေးတွေရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် အခြေအနေကို အခြေခံပြီး ပုံဖော်ရိုက်ကူးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်.. Bollywood Fanတွေအတွက်5ရက်နေ့ မှာ စတင်ပြီး ပြသပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်.. ပွဲချိန် - နံနက် ၁၀:၃၀နာရီ၊ ညနေ ၄:၃၀နာရီ Phone Booking: 09-2017450, 09-783317523 တစ်ပတ်စာကြိုတင်လက်မှတ်များ ၀ယ်ယူနိုင်ပါပြီ။
**The Promise ** (Thai Horror) ========================= Screening Date : (13.10.17) ကဲ.. ထိုင်းနိုင်ငံက ပရိတ်သတ်တွေကိုယ်တိုင်က အော်ဟစ်နေကြတာ မြင်တဲ့အတိုင်းပါဘဲ.. ဒီကပရိတ်သတ်တွေရော ကြည့်ဖို. Ready ဘဲလား? (13.10.17)နေ့မှ စတင်ပြီး ပြသပေးတော့ မှာ ဖြစ်ပါတယ်.. ပွဲချိန် - နံနက် ၁၀:၃၀နာရီ၊ ညနေ ၄:၃၀နာရီ Phone Booking: 09-2017450, 09-783317523 တစ်ပတ်စာကြိုတင်လက်မှတ်များ ၀ယ်ယူနိုင်ပါပြီ။
Kingsman: The Golden Circle (2D) ============================ Screening Date : (29.9.17) ခပ်ကြမ်းကြမ်း Action Scene တွေနဲ. လက်ရှိကမ္ဘာ.နံပတ် (၁) ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးအား မနကဖြန် 29.9.17မှ စတင်ပြီး ပြသပေးတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်. ပွဲချိန် - နံနက် ၁၀:၃၀နာရီ၊ ညနေ ၄:၃၀နာရီ Phone Booking: 09-2017450, 09-783317523
** IT : Part 1 - The Loser's Club** ========================== Screening Date : (22.9.2017) ကြောက်စရာ ကောင်းတဲ့ Pennywise ကြီးကို ကိုယ်တိုင် ကြည့်ရှုခံစား နိုင်ဖို့ 22.9.17ကစပြီး ပြသပေးတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်.. ဒီရုပ်ရှင်ထဲက scene တစ်ခုကို ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် အမြည်းအနေနဲ့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်.. ပွဲချိန် - နံနက် ၁၀:၃၀နာရီ၊ ညနေ ၄:၃၀နာရီ Phone Booking: 09-783317523, 09-2017450 တစ်ပတ်စာကြိုတင်လက်မှတ်များ ၀ယ်ယူနိုင်ပါပြီ။
** IT** ===== " GET TICKETS NOW" အားလုံးစောင့်မျှော်နေတဲ့ IT ဟာရုံပေါ်ကိုအရောက်လာနေပါပြီ... လက်ရှိကမ္ဘာ.နံပတ်တစ်နေရာမှာရပ်တည်နေတဲ့ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ IT သရဲကားသစ်ကြီးကို လားရှိုးမြို့၊ အောင်သီရိ အဆင့်မြင့်ရုပ်ရှင်ရုံမှာ နောက်အပတ် သောကြာနေ့(22.9.2017) ကစပြီး ပြသ ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်.. ပွဲချိန် - နံနက် ၁၀:၃၀နာရီ၊ ညနေ ၄:၃၀နာရီ Phone Booking: 09-783317523, 09-2017450 လက်မှတ်တွေ ကြိုတင် ၀ယ်ထားမှ စိတ်ချ ရမယ်နော်..
***IT*** ========================= (Coming Soon on Mingalar Cinemas) Annabelle: Creation နဲ့ The Conjuring Series ကိုဖန်တီးထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ထုတ်လုပ်ရေးအဖွဲ့ကဘဲရိုက်ကူးတဲ့ Horror ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားသစ် "IT" Stephen Kingရဲ့ 1986ခုနှစ်က နာမည်ကျော်သရဲ ဝထ္တုဖြစ်တဲ့ ITကို အခြေခံပြီး ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ဟာ 1989ခုနှစ်ကို အဓိက အခြေခံထားပြီး Pennywise Dancing Clownလို့ ခေါ်တဲ့ Shape shifting Demon တစ်ကောင်နဲ့ ကလေးတွေ တွေ့ကြုံရတာကို ရင်ထိတ်သည်းဖို့ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပါ… ခုတော့ဇာတ်ဝင်ခန်းလေးတစ်ခု အမြည်းခံစားကြည့်ကြပါဦးနော်... Mingalar Cinemas များမှာ မကြာခင် ပြသပေးသွားမှာပါ...
မနေ့ညက မအိပ်သေးတဲ့ပရိသတ်တွေကို Video Clip လေးတစ်ခုလက်ဆောင်ပေးခဲ့သလိုဘဲ ဒီနေ့ညမှာလည်း Annabelle : Creation ဇာတ်ကားထဲက သရဲခြောက်တဲ့အိမ်ကြီးကို ကိုယ်တိုင်ရောက်သွားသလိုခံစားရမယ့် "Annabelle : Creation 360° VR Experience" ကိုခံစားကြည့်ကြပါဦး လူကိုယ်တိုင်ဖုန်းကိုင်ပြီးကြိုက်တဲ့ဘက်ကို အပေါ် အောက် ဘေး ဘယ် ညာ အကုန်လှည့်ကြည့်လို့ရသလို လက်ကလေးနဲ့ပွတ်ရပြီးလဲ လှည့်ကြည့်လို.ရပါတယ် အသံကိုလဲ နားကြပ်လေးတပ်ပြီးနားထောင်ရင် ပိုကောင်းပါတယ် မအိပ်သေးတဲ့ပရိသတ်တွေ ဖွင့်ကြည့်ကြနော်.... **ANNABELLE : CREATION - 2D** ဖြစ်ရပ်မှန်တစ္ဆေရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို 18.8.2017 မှစတင်ပြသပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်.. ပွဲချိန် - နံနက် ၁၀:၃၀နာရီ၊ ညနေ ၄:၃၀နာရီ Phone Booking: 082-23026, 09-2017450, 09-783317523 တစ်ပတ်စာကြိုတင်လက်မှတ်များ ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ
**ANNABELLE : CREATION** ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ The Conjuring ဇာတ်ကားတွဲထဲက Annabelle : Creationဖြစ်ရပ်မှန်တစ္ဆေရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားသစ်ကြီးကို 18.8.2017 မှစတင်ပြသပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်.. ပွဲချိန် - နံနက် ၁၀:၃၀နာရီ၊ ညနေ ၄:၃၀နာရီ Phone Booking: 082-23026, 09-2017450, 09-783317523 တစ်ပတ်စာကြိုတင်လက်မှတ်များ ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။
***Munna Michael*** ~~~~~~~~~~~~~~~~ 11.08.2017 မှစတင်၍ပြပြီ။ Michael Jacksonကို ရူးသွပ်တဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက် ရဲ့အကြောင်း Bollywood Style မြူးကြွတဲ့ အကတွေနဲ့ ရိုက်ကူးထားတဲ့ Munna Michael ကို 11.08.2017 မှ စတင် ပြသသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်. ပွဲချိန် - နံနက် ၁၀:၃၀နာရီ၊ ညနေ ၄:၃၀နာရီ Phone Booking: 082-23026, 09-2017450, 09-783317523 တစ်ပတ်စာကြိုတင်လက်မှတ်များ ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။